Ciidamada Soomaaliya kuwa Itoobiya oo kaabiga ku ah degmada Waajid ee Gobolka Bakool – Radio Daljir
Oktoobar 20, 2013 3:37 b 0
Bardaale, October 20, 2013 – Ciidamada Soomaaliya iyo meleteriga taageera ee Itoobiya ayaa ku baxay degmada Waajid ee gobolka Bakool oo ah mid ka tirsan meelaha ay gacanta ku hayaan ururka Al-shabaab, ciidamada huwanta ayaa kaabiga ku haya degmada.
Goobjooge ku sugan Waajid oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in degmada laga dareemayo dhaqdhaaq xoog leh oo ay wadaan ururka Al-shabaab iyo cabsi la soo deristay dadka degmada ku sugan, maadama xiligan ay ciidamo huwan ah ku dhowaadeen degmada.
Meleteriga huwanta ah ayaa bilaabay qorshaha ay ugu jihaysteen dhanka degmada Waajid iyagoo ka soo baxay degmada Luuq ee gobolka Gedo ka tirsan iyo weliba degmada Bardaale ee gobolka Baay oo labbaduba ka mid ah meelaha ugu waa wayn ee ay degan yihiin ciidanka Itoobiya.
Hugaamiyaasha ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya ee xiligan bilaabay howlgalka Waajid ayaan la aqoon sababta ka dambaysa iyo nooca qorshaha ay damacsan yihiin, balse war dhowaan ka soo baxay gaashaandhiga Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dhowaan ay weerari doonaan meelaha ay shabaab dalka ka joogaan.
Waajid waxay ka mid tahay meelaha ugu waa way nee Al-shabaab ay saldhigyada ku leeyihiin, Gen. Ibraahim yarrow oo ka tirsan saraakiisha dowladda oo warbaahinta la hadlay dhowaan ayaa sheegay in ay soo afjareen qorshe la diyaariyey oo lagu qabanayo meelaha ay Al-shabaab ka joogaan gobollada Bay iyo Bakool iyo Gedo.